फोगटिया ग’फ चुटेर भत्ता प’ड्काउने नेता भन्दा बरु सत्य बोल्ने भिम उपाध्याय जाती: ज्वाला संग्रौला – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
फोगटिया ग’फ चुटेर भत्ता प’ड्काउने नेता भन्दा बरु सत्य बोल्ने भिम उपाध्याय जाती: ज्वाला संग्रौला
भिम उपाध्याय सरका ५ हजार फेशबुकमित्रहरु मध्धे अधिकांश इन्जिनीयर , ठुला नेता , उच्च पदस्थ कर्मचारी , पत्रकार र एलिट क्लासका मानिस देश बिदेशमा समेत उल्लेखनिय छन् ,५८ हजार फलोअर छन् |
उनलाई सरकारले अनाबश्यक दुख दिराको बेला म जस्तो सर्बसाधारणले समते पटक पटक वहाँको पक्षमा बोलेको छु!
तर ती एलिट बर्गका फेसबुके हरु, नेतासँग घाँटी जोडिएकाहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु र वहाँको मुखमा क्यामेरा घुमाउने पत्रकारहरु आज कुन दुलोमा निदाएका छन्? बोल्नु पर्दैन वहाँको न्यायको निम्ति? भीम उपाध्याय सरको गि’रफ़्तारी इतिहाँसकै निन्दनीय हर्कत हो ! वहाँलाई तुरन्त रि’हा गरियोस्!
रेल ,तेल र पानी जहाजका फोकटिया गफ चुटेर जनता ढाँट्ने शासककाई किस्ता किस्तामा चुटेर ढुटो पार्न देशलाई भीम उपाध्याय जस्तो शाहसी र सत्य बोल्ने मान्छेको ￼खाँचों छ! जनता माथी अत्याचार गर्न बन्द गर नालायक सरकार !
तेरो एकलौटी बन्दुकको नोकर हैनौ हामी , तेरो निरंकुश फाँसिबादी दमनतन्त्रको दास हैनौ हामी ! भीम सरलाई कसरी पाँचबर्ष जेल राख्छस् हामी पनि हेरौंला ..!
Previous हेम एण्ड माया फाउन्डेसनको प’हलमा मिलन कार्कीबाट मोरङको विपन्न व’र्गलाई राहत वितरण !
Next सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ वि’रुद्ध जाहेरी दर्ता हुन्छ: प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली
23 seconds ago Mechi Mahakali